“बाथरुममा युवतीलाई दुवै कपडा खोलेर पालैसँग खोल्न लागेको भिडियो भाइरल हेर्नुहोस “ – Krazy NepaL
“बाथरुममा युवतीलाई दुवै कपडा खोलेर पालैसँग खोल्न लागेको भिडियो भाइरल हेर्नुहोस “
November 19, 2020 937
इन्टरनेटमा आफ्नो तस्विर राखी आफूलाई गर्भवती बनाउन पुरुषलाई खुलेआम यौ”न प्र”स्ताव राखेपछि एक जना रोमानियाली महिला अहिले सेलिब्रेटी बनेको छन् ।
त्यत्तिकैमा उनले एक्कासी क्यामेरामा हेरेर भन्छिन्, ‘तपाईं मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ नि होइन ? सायद केहीको प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईं जे का लागि प्रतिक्षा गर्नुभएको हो, त्यो नहुँदासम्म कुर्नुहुन्छ नि होइन ? तर त्यो हुँदैन । केही हुँदैन । सबैभन्दा पहिले म यो ट्याब (धारो) बन्द गर्छु । यहाँ पानी खेर गइरहेको छ ।’ अनि उनले पानी खेर गइरहेको धारो बन्द गर्छिन् । जनचेतना फैलाउने उनको यो शैली गज्जबको छ ।
थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’ ।
Prev“भिजाएर राखेको ज्वानोको पानी पीउदा १२ रोगको समस्याहरु दुर हुने (जानकारी पद्नुस )”
Next” खाँ डी देशमा बाध्यताले पुगेकी नेपाली चेलीको दर्दनाक भिडियो मन थामेर हेर्नुहोस”